हरिको फोन सिधै इन्स्पेक्टरलाई ! हेमाको खुल्यो नयाँ रहश्य, प्रहरीको फुली उखल्न पाइन्छ ? (हेर्नुस् भिडियो) – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/हरिको फोन सिधै इन्स्पेक्टरलाई ! हेमाको खुल्यो नयाँ रहश्य, प्रहरीको फुली उखल्न पाइन्छ ? (हेर्नुस् भिडियो)
बच्चा बोकेकी महिला हिमा श्रेष्ठमाथि जथाभावी ला’ठी हा’न्ने प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) को जिम्मेवारी खोसिएको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीको नेतृत्वमा कार्यरत इन्सपेक्टर देवीप्रसाद पौडेल लाई नेतृत्वबाट हटाएर सट्टामा नयाँ इन्स्पेक्टर पठाइएको जनाइएको छ । यसै बिषयलाई लिएर सामाजिक अभियन्ता तथा निर्देशक हरि उदासीले पनि आफ्नो धारणा ब्यक्त गरेका छन् ।
उदासीले महिलामाथि भएको दु’र्व्यवहारको खण्डन गर्दै प्रहरीमाथि पनि दु’र्व्यवहार भएको बताएका छन् । कसैको बचाऊका लागि खटिएका प्रहरीको फुली तान्न पाईन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन् । जिम्मेवारी खोसिएका इन्सपेक्टर पौडेललाई तत्काल फोन गरेर हिमाले पनि अपशब्द बोलेको, धकेलिएको र आफु (इन्सपेक्टर) ले त्यस्तो कदम चल्नु परेको बताएका छन् । हेर्नुस् यो कुराकानी तलको भिडियोमा :
उफ !! जिउदै यसरि जलाए आफ्नै श्रीमतीलाई अगेनोमा(भिडियो)